Sandals Resorts South Coast dia mamoaka drafitra famolavolana vaovao
Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Sandals Resorts South Coast dia mamoaka drafitra famolavolana vaovao
Sandals Resorts International, orinasa misy ifandraisany amin'ny rehetra, namoaka drafitra famolavolana fanamboarana an-tapitrisany dolara ao amin'ny oasis any Jamaika, Sandal South Coast. Hanomboka ny lahasa voalohany amin'ity volana desambra ity ny vahiny dia afaka manantena vanim-potoana vaovao ho an'ny orinasam-pandraharahana miaraka amin'ny fanampian'ny Swim-up Rondoval ™ Suites voalohany indrindra eto an-tany, miorina amina farihy 17,040 toradroa toradroa. Hifaly amin'ny fitsangatsanganana tanteraka ao amin'ny Village Dutchanda misy efitrano 112 misy mpitsidika miaraka amin'ny fidirana mivantana amin'ireo dobo filomanosana vaovao roa koa ireo vahiny. Toerana fampakaram-bady maoderina maoderina no nampiana mba handravaka ny zaridaina ao amin'ny Resa-tanàna italianina
Rehefa avy nampiditra ny famolavolana Rondoval farany ambany amin'ny Sandals Grande Antigua, arahin'i Sandals Grande St. Lucian, Sandals Grenada ary Sandals Royal Barbados, Sandals South Coast dia izao mametraha dingana lehibe iray hafa miaraka amin'ny Swim-Up Rondoval Suites voalohany. Natao ho fialofana mahavariana izay tavela lavitra ny lalan'izao tontolo izao, ny 20 Swim-up Rondoval Suites dia handrefesana savaivo mirefy 22 metatra miaraka amin'ny valindrihana conical 20 metatra. Manakaiky ny rano kokoa noho ny teo aloha ny vahiny, ny suite ao amin'ny boriborintany dia ahitana ireo dobo fitobiana manokana voaravaka loharano mitafy fitaratra italiana sy vatosokay vatosoa indoneziana. Ny mari-pamantarana ny fanavaozana dia ny fidirana amin'ny dobo tsy misy fidirana 17,040 toradroa, ny pisinina lava indrindra any amin'ny Hemisphere Andrefana, ny Tranquility Soaking Tub ™ iray misy scartoped ary ny volo any an-trano mahafinaritra miaraka amina fahitana any ivelany ivelany. Ny fanaka dia haingoina erak'izao tontolo izao, ny fandroana dia hirehareha amin'ny zava-poana misy vato mihantona miaraka amin'ny fitaratra misy taratr'i Hollywood, ary any ivelany, ny fanaka amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ankehitriny dia hamita ny sidina amoron-dranomasina tsy miankina. Ny mpivady dia hankafy ny fitandremana fanalefahana mpitondra kapoaka manokana, nampiofanin'ny Guild of Professional English Butlers, manolotra ny exclusivity tanteraka mandritra ny fotoana ijanonany.
Manantena mihoatra lavitra noho izay antenain'ireo mpandeha fialam-boly ho an'ny taranaka fara mandimby, ny Village Dutch of the resort dia hanana fanamboarana tanteraka hametrahana ny seho ho an'ny fialam-boly maoderina entin'ny ranomasina. Ny suite feno reimagined dia ho fihenan'ny hatsarana voajanaharin'ny rano miaraka amin'ny loko manga sy tsy miandany. Ny tanàna misy efitra 112 - ahitana efitrano 16 Butler Elite sy efitrano 96 Club sy Luxury Level dia misy fandroana sy fandroana maimaim-poana ao anaty trano, Tubes soaking Tranquility any ivelany ho an'ny roa, ary fidirana milomano avy amin'ny pisinina manokana ho an'ny sokajy voafantina.
"Sandals South Coast dia iray amin'ny toerana tsara indrindra any amin'ny tany tsy misy sarintany ao Jamaika," hoy i Gordon "Butch" Stewart, filohan'ny Sandals Resorts. "Ny tanjonay dia ny hihoatra ny andrasantsika hatrany, ary ny Sandals South Coast vaovao dia hanao izany sy maro hafa. Ilay toeram-pialan-tsasatra izay miorina ao anaty fitehirizan-java-boary 500 hektara, miaraka amin'ny rano manga kristaly no aingam-panahinay ho an'ity tetikasa mivelatra ity. Tsy afaka miandry ny fitsidihan'ny vahininay ireo fanavaozana vaovao sy mahafinaritra ireo. ” Notohizan'i Stewart.
Ireo fanatsarana ireo dia hanatevin-daharana ireo endrika famolavolana maritrano fialan-tsasatra efa an-dàlam-pandraharahana, toy ny Bungalow Over-the-Water lafo vidy, ny Chapel Wedding Serenity Over-the-Water, ary ny bar banga izay manome fomba fijery 360-degree an'ny ranomasina.
Sandal South Coast dia hisokatra amin'ny 1 Oktobra 2020. Ny Swim-Up Rondoval Suites vaovao ary nohavaozina ny Village Village Dutch dia manaiky famandrihana ho an'ireo tonga manomboka ny 10 Desambra 2020. Mba hamandrihana ny fialan-tsasatra Luxury Included® ao amin'ny iray amin'ireo suite mahasarika ireo, tsidiho ny: https://www.sandals.com/south-coast/.
Mahazo fitaovana fiarovana COVID-19 i Entebbe International Airport